(Dhegayso) Madaxweyne Camey,” Waa in wax la iska weydiiyo cida mar walba jabisa heshiisyada nabadeed ee Gaalkacyo. | puntlandi.com
(Dhegayso) Madaxweyne Camey,” Waa in wax la iska weydiiyo cida mar walba jabisa heshiisyada nabadeed ee Gaalkacyo.
Madaxweyne ku xigeenka dowladda Puntland, Eng. Cabdixakiin Camey ayaa ku qeexay shirka Gaalkacyo ka socda inuu yahay mid dib loo eegayo heshiiskii ay wada galeen dowladda Puntland iyo maamulka Galmudug ee Cadaado, heshiiskaas oo ahaa mid lagusoo afjarayay colaadaha miyiga gobolka Mudug.
Ku simaha madaxweyne Camey ayaa sheegay inay dhaceen falal lidi ku ah amniga, sidaas darteedna loo baahan yahay in wax la iska weydiiyo arrimaha colaadaha keenay iyo cida jabisay heshiiskii Gaalkacyo lagu galay bishii todobaad ee sandkaan.
Waxaa kale oo madaxweyne ku xigeenku sheegay in shirkaan loo fadhiyo haatan looga hadlayo wax ka qabashada colaada iminka ka taagan gobolka Mudug iyo in la helo xal waara oo ka hanaqaada gobolka Mudug oo idil, iyadoo cid walba masuuliyadeeda qaadanayso.